Phila Pirate Bay - Khuphela umculo, iimovie, simahla!
Ezona Ndlela zokuSebenzisa amava akho ePirate Bay [Ihlaziyiwe ngo-Epreli 2019]
Ixesha linokuba lihambelana, kodwa likwanelo. Zininzi kakhulu iintsuku ekufuneka sichithe kulo mhlaba wethu. Ukulinda kwi-torche ecothayo akufuneki kube yindlela esisebenzisa ngayo la maxesha.
I-Pirate Bay idume ngokubonelela ngokufikelela ngokukhawuleza nangokufanelekileyo kumxholo oyifunayo. Olu dumo lubangelwa kukuba abantu abaninzi banegalelo kwinkqubo yokuhlwayela nokulayisha ngokungaguqukiyo, bencedisa ukuyila uluntu lwabasebenzisi-ngqondo enye abaxhasanayo.
Ungafumanisa ngakumbi ngePirate Bay apha ukuba awuyazi ngeqonga: https: //www.thepiratebay.wiki.
Xa udibana nomjelo ocothayo, oko kungabangelwa kukunqongophala kwembewu okanye umxholo wefayile. Ngomsebenzisi ophakathi, umba awukho kwiPirate Bay. Kuyinto kunye neseti abanayo ekhaya.
Ezona ndlela zilula zokuPhucula isantya sakho sokuLanda
Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba ukhuphelo kunye nokulayisha isantya esikucaphule kwi-ISP yakho ngexesha lokuthengisa kwabo kubonisa ubuninzi onokulufikelela. Iindawo ezininzi azifane zisondele kula maxabiso abhengeziweyo. Njengomthetho oqhelekileyo wokukhwela, licebo elihle uku-oda malunga nesantya esimalunga nama-50% kunokuba ucinga ukuba kubalulekile ukuqinisekisa ukuba unamava angcono.
Oko kuthetha ukuba ucinga ukuba i-50 Mbps ikhawuleze ngokwaneleyo ukuhlangabezana neemfuno zesantya se-Intanethi, ke kuya kufuneka ukhethe i-Mbps ezingama-75 endaweni yayo.
Kubalulekile ukukhumbula ukuba ii-MBps kunye neeMbps ziyimilo eyahlukileyo. Ukuba une-1.44 MBps, ke loo nto ilingana ne-11.5 Mbps. Ukwenza i "B" kuthetha ukuba uguquka usuka kwi-megabits uye kwi-megabytes ngomzuzwana.
Nje ukuba wenze isantya sakho ngokukhawuleza, nazi ezinye iindlela ezongezelelweyo zokuphucula amava akho kwiPirate Bay.
1. Jonga indlela yakho kunye nemodyuli
Ukuba ufumana uqhagamshelo lwe-Intanethi ngokuthe ngcembe, imodyem yakho inokusola. Yintoni into yokuqala oyenzayo xa udibana nokuyeka idatha? Useta kwakhona imodyuli. Ukuba oko akusebenzi, ke ukhulula i-router, kwaye uphinde uyixhome kwakhona. Kuya kufuneka uphucule ezi zixhobo ukuba ufumana uqhagamshelo rhoqo ngelixa uhambisa amanzi.
2. Skena inkqubo yakho
Ngaba uyazi ukuba ixesha lokugqibela yayikukuthini ukuba uskene ukusasaza intsholongwane kwinkqubo yakho? I-Malware, iTransjans, kunye nezinye izinto ezingafunekiyo zinokuchitha izibonelelo zekhompyuter yakho. Xa oko kusenzeka, isantya sakho siyanetha ngenxa yoko. Kunokuba luncedo ukwenza ukuvavanywa kwemihla ngemihla, ngakumbi ukuba ukhuphela iimpompo rhoqo.
3. Nciphisa ukuphazamiseka kwinkqubo yakho.
Kukho imveliso ebizwa ngokuba yiWebroot esebenza kuMac ®. Ukuba iyasebenza, oko kubangela uphazamiseko kwinkqubo ukuze ungasakwazi ukusebenzisa imisebenzi yokuyalela. Kuya kufuneka uvale isoftware ukuvumela ukuba iwindow isebenze. Kukho iinkqubo kunye namaqonga amaninzi anokubangela uphazamiseko kwinkqubo yokukhuphela okanye isantya se-Intanethi.
4. Usaqhuba isihluzo?
Ukuba uqhagamshelo lweDSL endaweni yeBroadband ye-Intanethi, ke umgangatho wefiltha yakho ungangumba. Ukuphazamiseka okwenzeka emgceni kunokubangela ukuwa ngequbuliso, kunyanzele ukuba uphinde unxibelelane. Enye ingxaki kule meko ethile ekufuneka uyiqwalasele ubukho befowuni engenacingo. Zama ukuya kuvavanyo lokuba wedwa ukuze ubone ukuba ngaba iyunithi enye eyakha iingxaki ohlangabezana nazo ngePirate Bay.
# 5. Unayo ibhloko ye-ISP kwisiza.
Ezinye ii-ISPs ziya kuvala iqonga lonke xa uzama ukufikelela kwiPirate Bay. Abanye basebenzela ukuthintela umxholo abakrokrela ukuba unelungelo lokushicilela. Ukuba udibana nale meko, ke kunokuba luncedo ukuzama enye yeendawo zokusebenzela isipili: https://tpb.wiki/.
# 6. Yenza uqhagamshelo ngqo.
Ukuba usebenza ngaphandle kwamacingo xa ufikelela kwiPirate Bay, isantya sakho sonxibelelwano siya kuhlala sisihla kancinci. Uya kufuna ukuzama ukuxhumeka ngqo kwimodem endaweni yoko ukuba unentambo yexesha elide ngokwaneleyo ukulungiselela olu khetho. Emva koko zama ukufikelela kwisibuko esisebenza kakuhle sePirate Bay ngo-2019 ukubona ukuba kukho indawo ekusetyenzwa kuyo malunga nomba we-ISP onokubakho: iPirate Bay.
Kusenokubakho eminye imicimbi yokuphazamiseka ekufuneka uyiqwalasele nayo. Ezinye iintlobo zebhokisi zeTV ezindala zinokuphazamisa i-Intanethi yakho, nokuba azifikeleli kwezixhobo. Ubude okanye iminyaka yeentambo zakho inokuba yingxaki. Kunokubakho uphazamiso lwangaphandle nezinye izixhobo ze-elektroniki.
Nje ukuba uhlengahlengise imiba enokubakho ethintela isantya sakho sokukhuphela, uya kukwazi ukonwabela zonke izibonelelo zokuhamba ngendlela ebonelelwa yiPirate Bay yonke imihla.